Igumbi labucala kwindlu yexesha elikufutshane nePenny Lane
Igumbi lakho lokulala e indlu ekumhlaba osikelwe izindlu sinombuki zindwendwe onguJules & Matteo
Igumbi lokulala elitofotofo kabini kwindlu yexesha kwindawo ekhuselekileyo nenobubele yaseLiverpool. Ukusetyenziswa kuphela kwegumbi lokuhlambela labucala, ukusetyenziswa kwekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye negadi ethandekayo enelanga.
SinoBeagle othe cwaka nonobubele kakhulu oneminyaka emi-5 ubudala, uSam, ngoko ke bamkele bonke abathandi bezinja.
Zininzi iindawo zokutyela, imivalo, iikhefi kunye neevenkile ezikufutshane, kwaye kumgama wokuhamba ukuya ePenny Lane, iStrawberry Field kunye neBeatles kumakhaya abantwana.
Iibhasi ezithe ngqo eziya kumbindi wesixeko kwaye rhoqo ngemizuzu engama-30 ukuya eAnfield.
Indlu yethu yakhiwa ngowe-1929, iminyango embalwa ukusuka kwiziko lokucima umlilo yaduma ngengoma yeBeatles ethi Penny Lane. Sijongene ngqo neTesco superstore enkulu yeyure ezingama-24.
Igumbi lokulala linebhedi ephindwe kabini, i-wardrobe, iitafile ezisecaleni kwebhedi, iidrowa njl.njl ezinezixhobo zokwenza iti nekofu.
Unegumbi lakho lokuhlambela elinebhafu kunye neshawa kwaye ungasebenzisa igumbi lokuphumla, igumbi lokutyela kunye nekhitshi. Sinegadi epholileyo nethandekayo enelanga ukuba ungathanda ukuphumla ngaphandle.
IAllerton yindawo ekhuselekileyo, ekhululekileyo yaseMazantsi eLiverpool egcwele iibhari ezinkulu, iindawo zokutyela, iikhefi kunye neevenkile. Iindawo ezinkulu ezivulekileyo zeCalderstones kunye neepaki zaseSefton zikufutshane.
Amakhaya kaJohn Lennon kunye noPaul McCartney angabantwana banokutyelelwa kule ndawo, kunye nePenny Lane kunye neStrawberry Field nje phezulu kwendlela.
Sihamba ngemizuzu eyi-12 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya saseLiverpool kunye nemizuzu engama-20 ukusuka kumbindi wedolophu kunye nolwandle, zonke zifikeleleka ngeebhasi eziqhelekileyo. Kukwakho neebhasi eziya ngqo kwiLiverpool Football Club kunye noololiwe abaya eManchester
Umbuki zindwendwe ngu- Jules & Matteo
Siyazi kakuhle iLiverpool kwaye ziyafumaneka kuyo nayiphi na imibuzo kunye neengcebiso onokuthi uzifune.
UJules & Matteo yi-Superhost